avy amin'ny admin tamin'ny 21-07-19
Araka ny fandraràn'ny plastika vaovao tokana an'i Aostralia, manomboka ny 1 Jolay 2021, "ireto zavatra telo manaraka ireto dia voarara amin'ny famarotana, ny famatsiana na ny fizarana ao amin'ny ACT": Kitapo vita amin'ny plastika tokana ampiasaina (ao anatin'izany ny kojakoja bioplastic) Mpikomy plastika tokana ampiasaina (ao anatin'izany ireo mpanetsiketsika bioplastic) Polyst nitarina ...
Kitapo fako biodegradable dia tena tsara, olona firy no tsy mahalala? Dia fantaro faingana miaraka amiko. Miaraka amin'ny famoahana ny fandraràna ny plastika, dia mihabe ny firenena toa an'i Angletera, Etazonia sy Aostralia nanomboka nametra ny fampiasana vokatra plastika. Ireto firenena ...
Mbola mampiasa vokatra plastika misy poizina ve ianao?
Inona avy ireo akora biodegradable? Tokony ho fantatrao izao manaraka izao. Raha nikaroka fonosana sakafo maharitra sy azo havaozina ianao, dia mety ho efa nandre momba ny akora biodegradable miorina amin'ny masinina katsaka sy PBAT. Ny kitapo fako eto an-trano izay tsy azo ovaina dia iray amin'ny tontolo iainana ...
Aorian'ny fandrarana ny plastika dia amidy amidy 100% ny sakaosy biodegradable!
Momba ny fandrarana ny plastika, inona no tokony hampiasaintsika? Eto ny kitapo azo ovaina! Niala tsikelikely tamin'ny fampiasana azy ny vokatra plastika, ary ny akora biodegradable vaovao dia hisolo ny vokatra plastika ho vokatra vaovao mifandraika amin'ny tontolo iainana. Ny kitapo biby fiompy dia vita amin'ny starch mais sy fitaovana PBAT ...
Ny Parlemanta eropeana dia nandany tamin'ny fomba mahery vaika ny fandrarana ny plastika, ary firenena / faritra 15 no namoaka ny fandrarana ny plastika. Mihabetsaka ny firenena no miditra amin'ny laharam-pahamehana, ary nanjary fironana mafana ny fanentanana ny tontolo iainana! Ny vokatra plastika dia mampiasa solika ho lasa akora, ary ny loharanom-pahalalana dia zara raha miakatra ...
Arovy ny tontolo iainana! Kitapo paompy biby azo ovaina 100%
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-02-10
Miaraka amin'ny fampitomboana ny fahafantarana ny fiarovana ny tontolo iainana, dia maro ny firenena toa an'i Shina, Royaume-Uni, Etazonia, Aostralia sns ... no nanomboka namoaka fandrarana plastika ary tsy hiparitaka intsony ny vokatra plastika. Tombony ho an'ny prot tontolo iainana manerantany ...